Voninahitra - SANXIA
Voninahitra sy zava-bitan'i Sanxia tato anatin'ny taona vitsivitsy
Sanxia dia mandray ny famolavolana indostrialy ho tapany lehibe, manatsara hatrany ny asa azo ampiharina sy ny ambaratonga estetika ny vokatra. Ekipa mpamolavola azy manokana, ary miara-miasa amin'ireo mpamorona fanta-daza ao an-trano sy any ivelany mba hamolavolana vokatra, manomboka amin'ny famolavolana, famokarana bobongolo ka hatramin'ny famokarana, ary manana patanty 40 mahery sy patanty fisehoana am-polony.
Ny fanavaozana ny famolavolana orinasa dia nanjary "tanana manosika" mahery hanatsara ny Sanxia. Ny vokatra dia manana vidiny, ny famoronana tsy misy vidiny. Ny fanavaozana ny famolavolana an'i Sanxia dia nitondra tsy nampoizina teo amin'ny tsena, ary ny fivoarana sy ny fivelarana dia nihatsara.
Miaraka amin'ny "pot iron iron of rock casting" any Sanxia, ​​nahazo ny loka German Red Dot Design Award ny orinasa tamin'ny taona 2020. Ny vatan'ny vilany dia nanampy endrika radiana, miaraka amina rafitra tsotra sy kanto. Avelao izao tontolo izao hahita ny asan'ny fanavaozana ny endrika indostrialy any Sanxia.
Mandritra ny fanavaozana ny haitao sy ny famolavolana dia manizingizina hatrany ny kalitao i Sanxia. Ny orinasa dia nanangana rafitra fanaraha-maso kalitao feno, ary ny vokatr'izy ireo dia nandalo ny fitsapana matihanina an'ny FDA sy LFGB.
Sanxia dia manana foibe fitiliana laboratoara. Tamin'ny taona 2020, nomena ny fankatoavana ny Komitin'ny fankatoavana nasionalin'ny China momba ny fanombanana ny fanarahana (CNAS). Izy io dia afaka manatanteraka samirery ny fanombanana ny mari-pahaizana momba ny lakozia vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Nanomboka teo, ny lakozia Sanxia dia afaka mamita tsy miankina ny fanamarinana ara-dalàna sy ny fanandramana ny vokatra, ary mampiasa ny marika CNAS Accreditation, ny marika ILAC-MRA / CNAS, sns., Nefa tsy mandalo amin'ny antoko fahatelo.
Amin'ny ho avy, Sanxia dia hanohy hanaraka ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, hifikitra amin'ny kalitao aloha, hanao fandrosoana maharitra eo amin'ny sehatry ny famokarana kojakoja fandrahoan-tsakafo, ary hanao zava-bita bebe kokoa, ary hamorona fitaovana an-dakozia sarobidy sy avo lenta kokoa ho an'ny fianakaviana manerantany.
Cast Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, ncoated Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, namel Skillet,